Miyaad i tusi kartaa sida loo abuuro meherad ganacsi oo dib loo bilaabo ganacsiga bilaashka ah?
Si aad u aragto wixii kale ee dhabarka ah ee ujeedooyinka SEO, ganacsiga dib-u-celinta ganacsiga ayaa ku soo noqonaya isla hal hadafka - helitaanka gaadiidka kordhaya oo si toos ah uga soo baxa boggaaga internetka. Looma baahna in la yiraahdo backlinks waxaa isticmaala Google laga yaabo in uu noqdo midka ugu sareeya. Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay in ay bixiso taxadar ku filan oo lagu dhisayo dib-u-tayo sare oo ku wajahan istaraatiijiyada guud ee suuq-geynta iyo istiraatiijiga. Aynu wajahno - ganacsiga dhisida dib u qabsiga ganacsiga wuxuu qaadaa waqti badan iyo dadaal. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon kartaa mid sahlan oo keliya in la bilaabo - oo si tartiib tartiib ah u socdo si aad u qaadatid hogaaminta oo aad ku adkaato nuugaaga raadinta internetka. Si fudud ula soco dariiqyada la yaabka leh ee hoos ku xusan. Marka aad isku daydid dhammaantood, waxaad xor u tahay inaad codsato wixii kale ee macquul ah si aad ganacsiga ugu dhejisid dib-u-eegidda ganacsiga boggagaaga. Sidaa darteed, halkan waxaa ah dhowr habab oo quruxsan oo wali ah oo hufan si loo abuuro boggaga ganacsigaaga in uu ka baxo tartanka - adigoon kharash gareeyo.
Ictiraafka Maxalliga ah iyo Hantida Ganacsiga
Waxaan kugula talinayaa isticmaalka xayiraadaha, bogagga internetka, iyo liiska online-ka ah "bilow kickass" bilawga ganacsiga dhismaha dib u soo celinta ganacsiga. Taasi waxay noqon kartaa meel aad u fiican oo ku habboon si aad u bilowdo helitaanka internetka oo balaaran oo loogu talagalay boggagaaga. Dhab ahaantii, adeegyadan noocyada badan ee noocyadda-buugga ayaa badankoodu aad ugu fiican yihiin makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google. Sidaa darteed, waxa aad u baahan tahay waa inaad sheegto magacaaga ganacsiga adoo adeegsanaya macluumaadka xiriirka iyo in aad dib u soo noqotid. Tusaalooyinka ugu fiican waxaa ka mid ah Google My Business, Yellow Pages, Yelp, Booqashada Ganacsiga Bing, Truelocal, iwm.
Meelahan dadku ku badan yihiin waxay aad u faa'iido u leeyihiin in ay si firfircoon uga dhigaan shabakadaada ganacsigaaga oo ay magacaaga u muujiyaan dad badan oo isticmaala firfircoon. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad xirto qaar ka mid ah isku xirnaanta warbaahinta bulshada ayaa abuuraya asxaab bulsho ee shirkaddaada - oo aad samaysay. U hubso in aad qabato hawlaha jadwalka ah iyo kuwa socota ee la xiriira profilesada ganacsiga - ha ka waaban inaad ku maal gashid wakhti aad ku qorto qoraalada joogtada ah si loo daabaco xiriir toos ah oo ku socda barta ganacsigaaga ugu weyn. Habkaas, kaliya ma heli kartid waxoogaa dib u eegis ah, laakiin wuxuu ka faa'iideysanayaa gaadiidka webka ee macquulka ah. Inkasta oo labadan siyaabood ee iskuulaadka ah ee ganacsiyada ah ee ganacsigooda dib loogu soo celiyo ganacsiga ayaa badanaa la yareeyey, sababtoo ah waxay awoodaan Si fiican u adeegso. Dhab ahaan, marwalba waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah jaraa'idyada caanka ah ee saxaafaddu u daadinayaan waxyaabo cusub. Waxyaabahani waa in la sii daayo war-saxaafadeed oo si wanaagsan u qoran oo ku saabsan mawduuc kulul oo la xidhiidha ganacsigaaga ganacsiga ama niche-ka - si dhakhso ah ayaa lagugu xiri karaa bulshada saxaafada iyo bloggeynta si loogu daboolo baahida dadweynaha ee degdegga ah. Si aad aduunka ugu faafisid saxaafadaada ugu fiican, waxaan kugula talineynaa inaad diirada saarto badeecadda ama adeeg cusub oo cusub si dib u qabsashadu u muujiso sida aad u raadin lahayd website-kaaga ganacsigaaga wixii macluumaad dheeraad ah. Inta badan warbaahinta saxaafadeed ee warbaahinta, barta casriga ah waxay u qalantaa in la isticmaalo wakhti wakhti ah - waxay hubaal ahaan bixin doontaa! Kaliya wax walba oo aad ku heshiin kartid xoog-saaraha xoogga leh ama milkiilaha blog -ka kadibna soo dhaji maqaalkaaga ku habboon si aad u hesho dib u laabasho. Ogsoonow, in qaababka kale ee soo jiidashada ah ee dhismaha isku xirka, blog-ka casriga ahi waa MUWAAD qabteen kuwa raadinaya dib u habeyn sare oo PR. Kaliya iska hubi inaad u socoto si aad u qorto barta internetka ee ku haboon oo leh dhib PR ah oo ku filan Source .